प्रधानसेनापति शर्माकाे एउटै घोषणाले देशभरका सैनिकहरुमा छायो खुसीयाली, के भने त्यस्तो ? — Imandarmedia.com
प्रधानसेनापति शर्माकाे एउटै घोषणाले देशभरका सैनिकहरुमा छायो खुसीयाली, के भने त्यस्तो ?
काठमाडौं । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको घोषणाले देशभरका सैनिकहरुमा खुसीयाली छाएको छ । नियुक्त भएदेखि नै सैनिकको मन जित्ने काम गर्दै आएका उनले अर्को प्रशंसायोग्य घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाली सेनाले दशैं विदामा घर फर्किने आफ्ना कर्मचारी र उनीहरुका परिवारलाई बस र हवाइ जहाजबाट निःशुल्क पुर्‍याई दिने भएको छ । असोज १८ गतेदेखि असोज ३० गतेसम्म सबै दर्जाका सैनिक कर्मचारी र उनीहरुको परिवारलाई बस तथा हवाइ यातायातबाट पुर्‍याउन लागेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिए ।
सेनाको कल्याणकारी सुविधाअन्तर्गत घर बिदामा जाने बहालवाला सैनिक र उनीहरुका परिवारलाई सो सुविधा दिन लागिएको हो । प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले आफ्नो पद बहालीसँगै सकल दर्जा र आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी सुविधा थप गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
नेपाली सेनाले दशैंमा आफ्नो गाउँ फर्कन चाहने सैनिकका आश्रित परिवारलाई बस र हेलिकप्टरबाट निःशुल्क रुपमा पठाउन थालेको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।
असोज १८ देखि नै सेनाका आश्रित परिवारलाई गाडी र हेलिकप्टरमा पठाउन शुरु गरिएको सैन्य प्रवक्ता ९सहायक रथी० सन्तोष बल्लभ पौड्यालले बताए । यस्तो सहुलियतपूर्ण यातायात सुविधा असोज २९ गतेसम्म जारी राख्ने उनले बताए । जंगी अड्डाले सडकको सहज पहुँच नपुगेका डोल्पा र हुम्ला जस्ता जिल्लामा हेलिकप्टरबाट सेनाका आश्रित परिवारलाई घर पठाएको छ ।
अहिलेसम्म हवाई उडानमार्फत ८६ र गाडीबाट ५२० जनालाई गन्तव्यमा लगिएको सैन्य प्रवक्ता पौड्यालले बताए निःशुल्क यातायात सुविधा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने र उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौं फर्किन चाहने सैनिक परिवारले प्रयोग गर्ने पाउने छन् ।
शर्मा नेपाली सेनाभित्र भलादमी र मिलनसार जर्नेलका रुपमा परिचित छन् । उनको जन्म २०२० पुस २१ मा काठमाडौँमा भएको हो । शर्मा पूरानो गोरख गणबाट सैनिक अधिकृतका रुपमा सेना प्रवेश गरेका थिए । ३७ वर्ष लामो सैनिक सेवामा उनले गुल्म, गण, बाहिनी र पृतनामा काम गरेका छन् ।
जंगीअड्डामा सैनिक सचिव, भर्ना छनौट, नीति तथा योजना, सह–बलाध्यक्ष, युद्धकार्य, सम्भाररथी, बलाध्यक्ष र बलाधिकृत रथीको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभवले उनलाई परिपक्व बनाएको छ । त्यसैगरी, पृतनापतिका रुपमा भने उनले हेटौडमा कमाण्ड सम्हालेका थिए ।
२० बेसिकका सैनिक अधिकृत शर्मा अमेरिकाको नियर इस्ट साउथ एसिया सेन्टर (नेसा) र एसिया प्यासिफिक सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडिज (एपीसीएसएस)ले संचालन गरेको विभिन्न सेमिनार र कोर्समा सहभागी भएका छन् । त्यसका साथै थाइल्याण्ड तथा पाकिस्तानबाट उनले प्रतिरक्षा सम्बन्धी तालिमसमेत हासिल गरेका छन् ।
उनी बंगलादेशका सैन्य सहचारी समेत थिए। उनि पुर्णचन्द्र थापा जस्ता पब्लिक फिगर त होईनन् तर उनलाइ ‘म्यान इन एक्सन’ टाईपको व्यक्तिका रुपमा मानिन्छ।
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट इतिहासमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने भारतबाट नेशनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) को तालिम र अमेरिकामा पनि सैन्य शिक्षा हासिल गरेका अधिकारी हुन्। उनी सुप्रबल जनसेवाश्री पदकबाट सम्मानित भइसकेका छन् ।
उनि आफ्ना सहकर्मीहरुसँग घुलमिल हुने र सिपाहीहरुसँग समेत सौहार्दरुपमा प्रस्तुत हुने स्वभावको रहेको एक सैनिक अधिकारीले जानकारी दिए। सरल स्वभाव भएका शर्मा वौद्धिक हिसावले पनि अब्बल मानिन्छ । शर्माले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका क्रममा पूर्वी टिमोरमा गुल्म र कंगोमा गणको अन्तर्राष्ट्रिय कमाण्ड गरेका छन्।
शर्मा भारतमा भएको नेपाल भारत द्विपक्षीय सल्लाहकार समूहको भेलामा समेत सहभागी भएका थिए । उनले सेनापतिमा नियुक्त हुनुभन्दा पहिला नै सेनामा बनाएको टिमले भावि सेनापति शर्माले केही राम्रो काम गर्न सक्छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
२३ वर्षिय युवाले सडकमा भेटेको एक लाख रुपैयाँ प्रहरीमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाए: जिल्लाका दुई युवाले बाटोमा पाएको एक लाख रुपैयाँ प्रहरीमार्फत सम्बन्धित ब्यक्तिलाई बुझाएका छन्। जिल्लाको कुशे गाउँपालिका- २ स्थायी घर भइ प्रधानमन्त्री आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई जाजरकोटमा जेटिए पदमा कार्यरत सुवास सिंह र भेरी नगरपालिका ४ घर भई सोही कार्यालयमा जेटिए पदमा कार्यरत २३ बर्षीय धर्म चन्दले भेरी नगरपालिका ४ गैरीखालीस्थित सडकमा आज विहान एक लाख रुपैयाँ फेला पारेका थिए ।
‘घुम्न निस्केका थियौं । बीच सडकमा प्लाष्टिकको झोलामा बेरेको सानो पोेको भेट्यौ। के रहेछ भनेर खोलेर हेर्दा एक लाखको गड्डी रहेछ । हामीले तत्काल प्रहरीलाई बुझाईदियौ,’ चन्दले भने । रकम हराएको करिब १८ घण्टापछि सम्पर्कमा आएका कुशे गाँउपालिका ९ मेलविसाउना निवासी ४५ वर्षीय धर्मे सार्कीलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी मधुकुमार थापाले बताए।
उनकाअनुसार रकम हराउने धर्मे कमाइका लागि केही समयअघि भारत गएका थिए। भारतबाट दशैँ मनाउन घर फर्केने क्रममा नेपालगञ्जमा भारतीय रुपैयाँ सटाएर शनिबार मात्र जाजरकोट सदरमुका आइपुगेका थिए । मदिरा सेवन गरेका कारण उनले रकम हराएका थिए।
मदिराको नशाले छोडेपछि शनिवार विहानमात्र रकम हराएको थाह पाएका उनले सोधीखोजी गर्दा प्रहरीको सम्पर्कमा आएको र उनको बयानका आधारमा रकम उनकै भएको यकिन गरेर रकम फेला पार्ने ब्यक्तिको रोहवरमा हराएको एक लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको प्रहरी प्रमुख थापाले बताए ।
रकम पाएपछि धर्मेले भने, ‘दिनरात अर्काको देशमा पसिना बगाएर कमाएको रकम हराए पनि फेला पर्‍यो । सत्यको धन रहेछ । कोही नहुनेको दैव हुन्छ भनेको साँच्चै रहेछ । अब यस्तो गल्ती कहिल्यै गर्दिन । रकम फेला पारेर इमान्दारपूर्वक प्रहरीलाई बुझाउने दुवै युवालाई प्रहरी प्रमुख थापाले धन्यवाद ज्ञापन गरे ।